नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागी के गर्नुपर्छ तथा पर्यटन क्षेत्रकै माध्यमवाट मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यसअघि मैले “हिँडे पुगिन्छ” भन्ने पुस्तकमा विस्तृतमा चर्चा गरेको छु । नेपाल सरकारले सन २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा न्युनतम रुपमा गर्नुपर्ने केहि अत्यावश्यक विषयहरुमा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु ।
त्यसो त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रीलाई सुझाव दिनका खातिर विज्ञ समुह नै निर्माण भएको छ । त्यो विज्ञ समुहले के गरिराखेको छ वा त्यसको प्रभावकारीता कति छ भन्नेतिर पनि यस लेखमा जान चाहन्न । तर विगत दुई दशकदेखि यसै क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्ति भएकोले मेरा केहि सुझावहरु राख्न चाहन्छु । किनकी हामी मन्त्री वा कुनै पदमा नभएपनि यो देशमा मेरो पनि तपाईं मन्त्रीहरु वा विभिन्न पदमा पदासिन व्यक्तिहरु जत्तिकै दायित्व छ । ठूला–ठूला काम गर्न त तपाईंहरुलाई समय नहोला,गाह्रो होला तर साना–तिना कामहरु त गर्न सकिन्छ नि । साना–तिना काम पनि नगर्ने हो भने त कसरी नेपाल भ्रमण वर्ष सफल होला र ? त्यसैले मेरा सुझावहरु बँुदागत रुपमा निम्नानुसार राख्न चाहन्छु ।
१) नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को नारा “एक्सपेरियन्स नेपाल” भन्ने त छ तर नाराले मात्र हुँदैन कि साँच्चिकै एक्सपेरियन्स नै बेटर हुनुपर्छ । त्यसको सुरुवात विमानस्थलवाटै गराउनसक्नुपर्छ । आज पनि विमानस्थलका कर्मचारीहरुको व्यवहार उस्तै अभद्र छ,त्यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सकेसम्म अनलाईन भिसा,लगेज व्यवस्थापनको समस्याको अन्त्य, दलालको अवरोधवाट मुक्ति तत्काल व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमै ट्याक्सी ड्राईभरहरुलाई पनि तालिम प्रदान गर्नुप¥यो । अतिथि देवो भवः भनेको के हो ? ट्याक्सी ड्राईभरलाई पनि बुझाउन सक्नुप¥यो । बस ड्राईभरहरुलाई पनि तालिम दिनुप¥यो । एयरपोर्टमा आज पनि सन २०११ का पुराना पोष्टरहरु छन, त्यति पोष्टर पनि फेर्न सकिएको छैन । त्यति काम पनि गर्न नसक्ने हो भने कसरी नेपाल भ्रमण वर्ष सफल होला र ?
२) हालको काठमाडौं धुलमाडौंमा परिणत भएको छ, यसलाई सफा बनाउन के पहल गर्नुहुन्छ ? कमसेकम “वेलकम टु काठमाडौं” भन्ने वोर्ड समेत एयरपोर्टको वाहिर राख्न सकिएको छैन । धुलो र धुँवाकै कारण पनि पर्यटक काठमाडौंमा एक दिन भन्दा बढि बस्न चाँहदैनन् । सामान्य वाटोघाटोको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । बरु रेल वा पानीजहाज पछि चढौंला,हाललाई हिँड्ने वाटोको अवस्था सुधार गर्नुप¥यो । काठमाडौंको वास्तविक अवस्था थाहा छैन भने त्यसको अनुभव गर्न बरु एकदिन पर्यटक बनेर काठमाडौं सहर घुम्न म पर्यटन मन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।
३) नेपालमा पर्यटन सुरु भएको पचास वर्ष भन्दा बढि भईसक्यो तर काठमाडौं, पोखरा वा चितवन कहिँ कतै पर्यटक बसपार्क समेत छैन । साठी वर्षमा पनि प्रमुख पर्यटकिय सहरहरुमा एउटा पर्यटक बसपार्क समेत वनाउन सकिँदैन ? बसपार्कमा एउटा शौचालय र टि स्टेशन समेत छैन । अन्य देशका बसपार्क हाम्रो एयरपोर्ट भन्दा व्यवस्थित भईसके तर हाम्रो अवस्था भने यस्तो छ । हामीकहाँ एउटा पनि पर्यटक शौचालयहरु छैनन । सामान्य भन्दा सामान्य पूर्वाधारहरुको अभावमा पर्यटकले सास्ती खेपिरहनुपरेको छ ।
४) सन २०२० मा नै नेपालमा पर्यटकहरु किन आउने ? पर्यटकहरु नेपाल किन आउँछन भनेर आजसम्म एउटा सर्भे समेत भएको छैन । सुर्योदय हेर्न वा ट्रेकिङ जान वा हिमाल चढ्न वा के का लागी पर्यटक नेपाल आउँछन भन्ने थाहा पाउन पनि एउटा सर्भे गर्न आवश्यक छ । त्यसवाट पर्यटकहरुलाई सवैभन्दा मन परेको चिज के हो भन्ने पनि पत्ता लाग्छ । यसो गर्न सकियो भने निजी क्षेत्र पनि लगानीको लागी आकर्षित हुन्छ । यो एउटा सर्भे छ महिना देखि एक वर्षको समयमा गर्न सकिन्छ ।
५) नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा सेवा प्रदायकहरुले के–कस्ता योजनाहरु ल्याएका छन भन्ने पर्यटकले प्रश्न गर्छन । त्यसैले सरकारले सेवा प्रदायकहरुलाई त्यस्ता योजनाहरु ल्याउन प्रेरित गर्नुप¥यो । हिमाली क्षेत्रमा भएका देखि राजमार्गका होटल, रेष्टुरेण्टहरु सम्ममा यस्ता योजना आउनुप¥यो । सन २०२१ वा १९ को साटो पर्यटक सन २०२० मै आउनुपर्ने कारण के त भन्ने खुलाउन आवश्यक छ । त्यसका साथै क्वालिटि कन्ट्रोलमा विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
६) सातै प्रदेशमा मुख्य पर्यटकीय स्थलहरु पत्ता लगाएर आधारभुत पूर्वाधारहरु बनाउनुप¥यो । संघियता लागु गर्ने पनि यो उपयुक्त समय हो । सातै प्रदेशका मन्त्रीहरु,मुख्यमन्त्रीहरु, सवै स्थानिय निकायका जनप्रतितिनधहरु लगायत सवैलाई यसमा संलग्न गराएर नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा मनाउनुप¥यो । देशैभरी मनाईनुप¥यो,केहि सिमित सरोकारवालाहरुलाई मात्र यसमा संलग्न गराएर राष्ट्रिय उत्सव बन्न सक्दैन । सवै राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुका साथै सम्पूर्ण युवा संगठनहरुलाई यसमा संलग्न गराउनुप¥यो । त्यतिमात्र होईन, नेपालमा भएका विभिन्न देशका सवै दुतावास र कुटनितिक नियोगहरु तथा विदेशस्थित नेपालका दुतावासहरुलाई यसमा संलग्न गराउनुप¥यो । त्यतिमात्र होईन, विदेश जाने सम्पूर्ण कामदार र पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई एम्बेसडर बनाएर सदुपयोग गर्न सकिन्छ,जसले गर्दा उनीहरुले विश्वभर नेपालको प्रवद्र्धन गर्न सकियोस ।
७) नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउँदा आम जनतालाई के फाईदा हुन्छ, आम जनताले यसवाट के लाभ प्राप्त गर्न सक्छन, त्यसवारे उनीहरुलाई जानकारी गराउनुप¥यो । यसवाट कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ, यतिवटा नयाँ गन्तव्यहरु सिर्जना गर्छौं भन्ने स्पष्ट भिजन सरकारको तर्फवाट आउनुप¥यो ।
८) कम्तिमा पनि नेपाल भ्रमण वर्षको अवसरमा तुरुन्तै गर्न सकिने राजमार्गहरुको सुधार गर्नुप¥यो । कम्तीमा पनि काठमाडौं भित्रिने सम्पूर्ण नाकाहरुलाई यहि अवसरमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । हरेक नाकावाट काठमाडौं छिर्न ३–४ घण्टा जाममा पर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा सुधार ल्याईनै पर्छ ।
९) यसै अवसर पारेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्य क्षेत्रिय विमानस्थल लगायत अन्य क्षेत्रिय विमानस्थलहरु तुरुन्तै सुरु गर्नुप¥यो ।
१०) नेपाल भ्रमण वर्षको अवसरमा नयाँ पर्यटक सवारी साधनहरु ल्याउनुप¥यो । हामीकहाँ भएका सवारी साधनहरु पुराना भए । त्यसका लागी व्यवसायिहरुलाई यो अवसरमा नयाँ सवारी साधन ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने निती सरकारवाट ल्याईयोस ।
११) सरकारको तर्फवाट पर्यटन क्षेत्रमा क्वालिटि अवार्ड, ईन्नोभेसन अवार्ड, दण्ड, जरिवाना र पुरस्कारको सुरुवात गर्नुप¥यो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा नै ती अवार्डहरु सुरु गर्नुप¥यो । विश्वका अन्य देशहरुमा यस्ता अवार्डहरु दिने प्रचलन छ भने नेपालमा पनि विभिन्न विधामा यस्ता अवार्डहरु दिनु आवश्यक छ । यस्ता अवार्डहरुले उद्यमीहरुलाई हौसला प्रदान गर्दछ ।
१२) पर्यटकको सुरक्षाको लागी खानामा शुद्धता मात्र होईन, उनीहरुलाई सही जानकारी दिन पनि आवश्यक छ । पछिल्लो समय पर्यटकहरुलाई गरिने गलत व्यवहार र प्रदान गरिने गलत जानकारी पनि समाधान गर्न जरुरी छ ।
१३) नेपाल भ्रमण वर्षका लागी अन्तर्राष्ट्रियस्तर प्रचार–प्रसारलाई तिव्र पारिनुप¥यो । प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालमा अझ प्रभावकारी उपस्थिति हुनुप¥यो ।
१४) यस अवसरमा फुटवल,क्रिकेट,योगा वा कुनै पनि खेलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नेपालको पर्यटकिय गन्तव्यहरु रारा,तिलिचो वा अन्य उपयुक्त स्थानमा गर्नुप¥यो । जसले गर्दा सिंगो विश्वको ध्यान नेपालमा आकर्षित होस ।
१५) सन २०२१ मा सगरमाथा आरोहण रोक्का गरियोस । जसले गर्दा निशुल्क रुपमा सन २०२१ मा सगरमाथा आरोहण बन्द हुने भनेर नेपालको प्रचारप्रसार निशुल्क रुपमा विश्वभर होस । साथै प्रकृतिलाई पनि आराम हुन्छ ।
(युवा पर्यटन व्यवसायि सिम्खडा“हिँडे पुगिन्छ” पुस्तकका लेखक समेत हुन)